CDBURNERXP ရုရှားအတွက်အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့် CD / DVD ကို-အရေးအသား drives တွေကိုလိုက်တဲ့အခါသူကအပြည့်အဝအားလုံးတာဝန်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အရည်အသွေး tool ကို, ဂရုစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ CDBurnerXP - သင် optical drive ပေါ်တွင်ပုံရိပ်များနှင့်စံချိန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ်သေးအစွမ်းထက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
CDBurnerXP - ဒီ tool အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှလူသိများ။ အမှန်မှာကပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ CD များနှင့်အလုပ်မီးရှို့ရွေးချယ်စရာအပေါငျးတို့သလိုအပ်သောအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
သင်ခန်းစာကို: CDBurnerXP အတွက် disk ကိုတစ်ဖိုင်ကိုရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို
ကျနော်တို့ကိုမီးရှို့ CD များအခြားအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုအကြံပြု
ဒေတာ disc ကို Burn
ရိုးရှင်းသောပြတင်းပေါက်တစ် drive ကိုမှတ်တမ်းတင်ဒေတာနဲ့အဆင်ပြေမထိုက်မတန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်ကသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိရရှိနိုင်မဆိုလိုအပ်တဲ့ halyards ရှို့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တူညီတဲ့အပိုင်းထုတ်လုပ်နေသည်နှင့် ISO-ပုံရိပ်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၌တည်၏။
အနည်းငယ်ကလစ်, သင်သည်မည်သည့်ထောက်ခံစက်ပစ္စည်းတွင်ပြန်ကစားနိုင်စေဖို့ကိုဆက်လက်ငှါ, disc ကိုအပေါ်တစ်ဦးမီးလောင် DVD-ရုပ်ရှင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
အသံ CD ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
တိကျတဲ့ tool ကို CDBurnerXP ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုဤကဲ့သို့သောစတာတွေအပုဒ်အကြားအလုပ်ဖြင့်ခေတ္တ, သီချင်းစာသား၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ် parameters များကိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်အသေးစိတ်အတွက်အသံဖမ်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်
အဆိုပါ optical disk ပေါ်မှာက ISO-image ကို Burn
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသငျသညျကို run ချင်သောက ISO-image ကိုရှိပါတယ်ဆိုပါစို့။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ဥပမာ, UltraISO အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးနိုင်သောကို virtual drive ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤအမှု၌, တစ်ဦး disk ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ image ကိုမှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန် CDBurnerXP ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနှစျဦး drives တွေကိုရှိပါက, သင်ကူးယူ discs တွေကိုများ၏ function ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်, သင်တယောက်ကိုတယောက် drive ကို (ထိုအရင်းအမြစ်) (ကို receiver) မှအချက်အလက်အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံမိတ္တူကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ CD-RW သို့မဟုတ် DVD-RW အကယ်. သင်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖျက်ပစ်ရန်ထို program ၏သီးခြားအပိုင်းချင်တယ်။ တဦးတည်းအမှု၌, လျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းဖျက်ပစ်, အခြားသောအတွက်ဖယ်ရှားရေး data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ, နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပိုပြီးထွက်သယ်ဆောင်လိမ့်မည်: ဒီနေရာတွင်နှစ်ခုဖျက်ခြင်းသည် Modes တစ်ဦးရွေးချယ်မှုရပါလိမ့်မယ်။
1. ရုရှားဘာသာစကားများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကို;
2. တစ်ဦး disc ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ဘို့အားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ;
ကျနော်တို့က disk ကို image ကိုဖန်တီးရန်အခြားအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုအကြံပြု
CD များကိုမီးရှို့များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြေရှင်းချက်၏တဦးတည်း - သင်က CD ကိုသို့မဟုတ် DVD ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်များအတွက်ထိရောက်သော tool ကိုရိုးရှင်းပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာလိုအပ်ခဲ့လျှင်သူတို့၏ CDBurnerXP အာရုံစိုက်ဖို့သေချာပါစေ။
CDBurnerXP အခမဲ့ Download
အသေးစား CD ကိုစာရေးဆရာ ဘယ်လို disk ကိုမှဖိုင်ကိုရေးသားဖို့ Windows7ကိုတစ်ဦးက ISO image ကိုဖန်တီးပေးဖို့ကိုဘယ်လို CDBurnerXP နှင့်အတူ CD ကို delete / / မိတ္တူကိုမီးရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို
CDBurnerXP - အသံဖမ်းခြင်းနှင့်ကူးယူ disk တွေကို formats CD, DVD, Blu-ray player, HD ကို-DVD ကိုများအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်က ISO-images နဲ့သိုလှောင်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရေးသားသူ: Canneverbe လီမိတက်
Size ကို:6MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: FAZER DOWNLOAD E INSTALAR CDBURNERXP (သြဂုတ်လ 2019).